BTC စျေးနှုန်းအတွက် breakout 'ဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံးရလဒ်' ဟုခန့်မှန်းချက်အသစ်ကြောင့် Bitcoin သည် $42K အောက်တွင်ကျဆင်းသွားသည် - Token Myanmar
BTC စျေးနှုန်းအတွက် breakout 'ဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံးရလဒ်' ဟုခန့်မှန်းချက်အသစ်ကြောင့် Bitcoin သည် $42K အောက်တွင်ကျဆင်းသွားသည်
Bitcoin (BTC) $44,000 ခုခံမှုသည် နွားများကို ကျော်လွှားရန် လွန်စွာသက်သေပြခဲ့သောကြောင့် ကြာသပတေးနေ့တွင် $40,000 သို့ နီးကပ်လာခဲ့သည်။
BTC/USD 1 နာရီဖယောင်းတိုင်ဇယား (Bitstamp)။ အရင်းအမြစ်- TradingView
ဒေတာ Cointelegraph စျေးကွက် Pro နှင့် TradingView သောကြာနေ့တွင် BTC/USD သည် 24 နာရီအတွင်း 4% ကျဆင်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။
၎င်းတို့သည် retracement စတင်ခြင်းမပြုမီ Bitstamp တွင် $44,450 ဖြင့် ထိပ်ဆုံးမှရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ ဤသည်မှာ ပြည်တွင်းအနိမ့်ဆုံးဒေါ်လာ 41,780 ဖြစ်သည်။
အဆိုးဆုံး ဆုတ်ယုတ်မှု ပြီးဆုံးသွားသည်ဟု မျှော်လင့်နေသူများအတွက် စိတ်ပျက်မိသော်လည်း၊ အကဲခတ်သူများသည် အဆိုပါ လှုပ်ရှားမှုကြောင့် မအံ့သြဘဲ ပေါ်လာပြီး ဒေါ်လာ ၄၀,၀၀၀ ထောက်ပံ့မှုအသစ်ဖြင့် စမ်းသပ်မှုဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်သည်ဟု ဆိုကြသည်။
လျှောက်ရမယ့်လမ်းက တော်တော်များတယ်။ #Bitcoin. pic.twitter.com/VY0BkTXYOM
— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) ဇန်နဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၂၂
လူကြိုက်များသောကုန်သည် Pentoshi သည်လည်းသူ၏ဆန္ဒကိုရရှိရန်ပေါ်လာသည်၊၊ BTC သည်သူယခင်သတ်မှတ်ထားသောအရာတွင်ဒေါ်လာ 42,000 အောက်နိမ့်သည် အဓိကအခွင့်အရေး ဝင်ခွင့်အတွက် ဒေါ်လာ 46,000 သည်နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာခြင်းသည် BTC/USD တွင် ကျဆင်းနေသောအခြေအနေများ၏ ဂန္တဝင်အချက်ပြမှုတစ်ခုဖြစ်သည့် "မရဏလက်ဝါးကပ်တိုင်" ဇယားတည်ဆောက်မှုဖြစ်သည်။
Cointelegraph အဖြစ် အရင်က အစီရင်ခံပါတယ်။ကျဆင်းနေသော ရက် 50 ရွေ့လျားပျမ်းမျှသည် ရက် 200 ရွေ့လျားပျမ်းမျှအောက်သို့ ဖြတ်သွားသောအခါ မရဏလက်ဝါးကပ်တိုင်သည် ဖြစ်ပေါ်သည်။ စွမ်းဆောင်ချက်က နည်းနည်းရှားပေမယ့် ရှိတယ်။ အမြဲတမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ရက် 50 ရက်၊ ရက် 200 ရွေ့လျားပျမ်းမျှနှုန်းများဖြင့် 1-ရက်ဖယောင်းတိုင်ဇယား (Bitstamp) BTC/USD။ အရင်းအမြစ်- TradingView
ရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်ရင်း၊ Decentrader အရောင်းအ၀ယ်အဖွဲ့မှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများသည် ကာလလတ်စျေးနှုန်းလုပ်ဆောင်မှုတွင် အတက်အကျရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာ 30,000 မှ $40,000 အကွာအဝေးသို့ နောက်ထပ်ကျဆင်းသွားနိုင်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
ဆက်စပ်- အပေါ်လား အောက်လား? Bitcoin ဆက်တက်လာမှာလားဆိုတာ ကုန်သည်တွေက သဘောထားကွဲလွဲနေကြတယ်။
ဒီဇင်ဘာလဆန်းပိုင်းမှ နှစ်လတာအတွင်း ကျဆင်းနေသည့် လမ်းကြောင်းသည် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်ဟု ၎င်းတို့က ငြင်းခုံကြသည်။ စျေးကွက်အပ်ဒိတ် သောကြာနေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ အပေါ်စီးက အနိမ့်ပိုင်းထက် "ဖြစ်နိုင်သည်" ဖြစ်သည်။
"နောက်ဆုံးခွဲထွက်ခြင်းမပြုမီ $44,000 နှင့် $38,000 အကြားတွင် နောက်ထပ်အကွာအဝေးအချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရန် လိုအပ်နိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအတိုင်းအတာသည် ၎င်းတို့အဆင်သင့်မဖြစ်မီတွင် ကြီးမားသောလှုပ်ရှားမှုများကို စိတ်မရှည်စွာ ရှေ့ပြေးလုပ်ဆောင်နေသည့် ကုန်သည်များအတွက် ပိုမိုနာကျင်မှုနှင့် စိတ်ဆင်းရဲမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည် ” လို့ အပ်ဒိတ် အကျဉ်းချုပ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အားပေးခြင်း ၊ Decentrader က ဆက်ပြောသည် ရန်ပုံငွေနှုန်းထားများ တဖြည်းဖြည်း ပိုဖြစ်လာတယ်။ တသမတ်တည်းအနုတ်လက္ခဏာ စိတ်ဓာတ်များသည် နောက်ဆုံးတွင် တစ်ဖက်သို့ ညှစ်ရန် ကျန်းမာသော အခြေအနေများ—နောက်ထပ် ကျဆင်းမှုကို မျှော်လင့်ခြင်းဆီသို့ ကူးပြောင်းသွားသည်။
"Bitcoin ၏ လက်ရှိအခြေခံအချက်များနှင့် လွန်ခဲ့သည့်2လအတွင်း ကျဆင်းနေသောလမ်းကြောင်း၏ အရွယ်အစားနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုတို့ကို ပေး၍ အကွာအဝေးမှ အတက်ဘက်သို့ ရွှေ့ခြင်းသည် နောက်ဆုံးတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပါသည်။"
BTC ရန်ပုံငွေနှုန်းထားဇယား။ အရင်းအမြစ်- Coinglass
Bitcoin တွင် မြို့တွင်းအရန်ငွေ၏ 1% ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ဟု ဘရာဇီးမြို့တော်ဝန်က အစီရင်ခံထားသည်။
အိန္ဒိယ INX ဖလှယ်မှုသည် Bitcoin အနာဂတ် ETF ကိုစာရင်းပြုစုရန်စီစဉ်ထားကြောင်းသတင်းရရှိသည်။